मे ५ : इतिहासकै शक्तिशाली नेपोलियनको मृत्यु कार्ल मार्क्सको जन्म
आज मे ५ विश्व इतिहासकै बहादूर र शक्तिशाली सैन्य शासक नेपोलियन बोर्नापार्ट, जसले एकपटक युरोपका धेरै देशमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गरेका थिए, उनको निधन बेलायती बन्दीका रुपमा दक्षिण एटलान्टिक समून्द्रस्थित द ... ....
श्रीमानले रातदिन सेक्स गरेको भन्दै लकडाउन हटाइदिन सरकारसंग माग ?
नेपालमा बैशाख १४ गतेसम्म लकडाउन लागु हुँदा भारतमा पनि लकडाउनको म्याद ३ मे सम्म बढाइएको छ । यस समयमा मानिसहरू घरहरूमा बन्द छन् । कोरोना फैलावटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यी कदम चालेका हुन् । लकडाउनको का ... ....
जन्मियो दुई टाउको भएको बाख्रा !
एजेन्सी । अमेरीकामा एउटा बाख्राले अनौठो पाठा जन्माएको छ । जसको टाउको दुई वटा छ र शरीर एउटा । ... ....
कोरोना संक्रमित महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माईन् , नाम राखिन् कोरोना र भाइरस !
कोरोना संक्रमणको प्रभाव मेक्सिकोमा पनि परेको छ । यस्तैमा कोरोना संक्रमित एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । ... ....
संसारको सबैभन्दा ‘डरलाग्दो’ बिरालो
जेरदान नामको यो बिरालोको इन्स्टाग्राम प्रोफाइल पनि छ जसमा २२ हजार बढी फलोअर्स छन् । उक्त बिरालोको हरेक फोटोमा हज्जारौं लाइक्स पनि आउँछन् । जेरदानको ६ वर्षको बिरालो हो । ... ....
मानिस हरु पछिल्लो समय रक्सि जन्य पदार्थको सेवन अत्यधिक गर्ने गर्दछन। सामान्य मानिस देखि लिएर भिआइपि सम्म रक्सीको कुलतमा फसेको देख्न सुन्न पाईन्छ। ... ....